PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Ucwaningo ngezibalo zentsha engasebenzi eNingizimu Afrika
Ucwaningo ngezibalo zentsha engasebenzi eNingizimu Afrika
wezimayini udale amathuba omsebenzi amasha angu-1 849 000, owezokwakha wadala angu-1 431 000 owe-manufacturing wadala angu-1 849 000. I-NKC African Economics ithe izinga lokungasebenzi kwabantu liphezulu kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika. UMnuz Gerrit van Rooyen weNKC, uthe ukunyuka kwesibalo sabantu abaphelelwe yithemba lokuthola umsebenzi kukhombisa ngokusobala ukuthi umnotho ngeke ukhule kahle.
“Kufanele uhulumeni eze nemithetho ezogqugquzela izinkampani ukuba zidale amathuba omsebenzi alungele intsha. Kulungiswe ezemfundo ukuze abantu bathi uma beqeda isikole bakwazi ukuzivulela amabhizinisi nokuthola umsebenzi ngamakhono abawathole esikoleni,” kusho uVan Rooyen.
Abantu abangasebenzi ezweni jikelele bangu-9 216 million, abaqashiwe bangu-16.4 million okusho ukuthi isibalo sokuqashwa kwabantu sinyuka ngo-1% minyaka yonke.
Abantu base-Eastern Cape yibona abaswele kakhulu amathuba omsebenzi njengoba isibalo sabangasebenzi siku-46%, kulandele iMpumalanga ngo-42.5%, kuze iNorth West ngo-41.8%.
Abantu abaphelelwe wumsebenzi bangu-15 320 uma beqhathaniswa nekota yokuqala yangonyaka odlule lapho isibalo besiku-15 474.
UMnuz Jason Muscat oyi-Senior Economist kwaFNB uthe akukho okuthusayo ngezibalo zakamuva ngoba yilokho akade bekulindele.
“Asisiboni isimo sishintsha ngokungaqashwa kwabantu yize silindele ukuthi umnotho ukhule ngo-2% kulo nyaka,” kusho uMuscat.
Amathuba omsebenzi emkhakheni wezolimo ehla ngo-3% kule minyaka emithathu edlule.
UMnuz Ian Cruickshanks oyichief economist eSA Institute of Race Relations, uthe ucwaningo lusho ukuthi izinhlelo zokukhulisa umnotho azitheli izithelo ezinhle.
“Isisombululo sale ndaba kuzoba wukutshelwa kwabantu abasha ikakhulukazi labo abasanda kuphuma kwa-matric ukuthi eminyakeni emibili kufanele babe ngomakhi, o-plumber, bakhande ugesi benze neminye imisebenzi yezandla,” kusho uCruickshanks.
UMnuz Wandile Sihlobo oyisazi somnotho kwezolimo, uthe ukwehla kwamathuba omsebenzi kulo mkhakha kusho ukuthi iNingizimu Afrika ngeke ikwazi ukudala amathuba omsebenzi angu-1 million ngo-2030 njengoba ihlela ukwenza lokho kwiNational Development Plan.